कहा जान्छ ? समातिएको नदीजन्य वस्तुु – News Portal
कहा जान्छ ? समातिएको नदीजन्य वस्तुु
February 8, 2019 epradeshLeaveaComment on कहा जान्छ ? समातिएको नदीजन्य वस्तुु
घोराही, २५ माघ । गत शुक्रबार मात्रै दाङका विभिन्न खोलाबाट प्रहरीले अवैधरुपमा ढुंगाजन्य पदार्थ उत्खनन्मा संलग्न तीनवटा गाडी पक्राउ परेको खबर जिल्ला समन्वय समितिमा आयो । प्रहरीले पक्राउ परेका ति गाडीबाट प्राप्त जरिभाना शुल्क समितिमा त बुझायो तर बरामद गरिएको ढुंगाजन्य वस्तु कहाँ गयो, जिल्ला समन्वय समितिलाई नै थाहा भएन् यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । दाङमा दैनिकजसो अवैधरुपले ढुंगाजन्य वस्तुहरुको उत्खनन् र निकासीमा संलग्न सवारी साधन पक्राउ गरेका छन् ।
प्रहरीले चोरी निकासीमा संलग्न गाडीबाट आएको रकम समन्वय समितिलाई त बुुझाउँछ तर अबैध ढुंगाजन्य वस्तुहरु कहाँ जान्छ यो प्रश्नको जवाफ समन्वय समितिलाई नै थाहा छैन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपाली भन्छन्– चिठी आउँछ सामान कहाँ जान्छ हामीलाई नै थाहा छैन्, हामीले सामान पनि पठाउन आग्रह गरेका छौँ तर प्रहरीले जरिवाना शुल्कबाहेक अरु पठाउन सकेको छैन् । ‘कानुनतः जफत भएका बस्तुहरु समन्वय समितिमा आउनुपर्ने र लिलाम गर्नुपर्ने हो तर प्रहरीले नै ति ढुंगाजन्य वस्तुहरु राख्ने गरेको छ’ उनले भने । हामीले पटक–पटक प्रहरीलाई बरामद गरिएको सामान पठाउन आग्रह गरिरहेका छौँ तर प्रहरीले चिठी र जरिवाना शुल्कमात्रै पठाउने गरेको उनले बताए ।
नियन्त्रणमा लिइएका गाडीबाट बरामद ढुंगाजन्य वस्तु समन्वय समितिले प्रहरीले नबुझाएको बताउँछ भने प्रहरीले समन्वय समितिलाई नै बुझाउने गरेको बताउँदा बरामद सामाग्री कहाँ जान्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ?
प्राकृतिक स्रोत अर्थात नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासमा संलग्न पक्राउ पर्ने गरेको खबर आउने गरेपनि बरामद गरिएको सामान भने बाटोबाटै हराउने गरेको छ । लामो समयसम्म पनि सम्बन्धित निकाय जिल्ला समन्वय समिति यस विषयमा बेखबर बनेको छ । ति ढुंगाजन्य वस्तुहरु कहाँ र कसले प्रयोग गर्छ भन्ने बारेमा समन्वय समितिमा अत्तोपत्तो छैन् । दैनिक रुपमा अवैध उत्खनन्मा संलग्न गाडी कारवाहीमा पर्ने गरेपनि अवैध ढुुंगाजन्य वस्तुहरु भने पाउन सकिएको छैन्, प्रहरीले आफै नै बरामद नदीजन्य सामान राख्ने गरेको प्रमुख नेपालीले बताए । यद्यपि प्रहरीले भने बरामद गरिएको सामाग्री जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाउने गरेको बताएको छ । राजस्व दिनेलाई फिर्ता गर्ने गर्छौ, अरु भने जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउने गरेको छौँ– जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बेलबहादुर पाण्डेले भने । ‘उहाँहरुले बेखबर छौँ भन्न पाउनुुहुुन्न, हामीले बरामद सामाग्री बुुझाउने गरेका छौँ, दुुरुपयोग भएको छैन्’ उनले भने ।
अधिकांश पक्राउ परेका गाडीलाई समन्वय समितिमा पठाउने गरेका छौँ, कतिपय प्रहरी कार्यालयमै छन् भने कतिपय त खाली पनि हुुन्छन् उनले बताए । लिलाम गर्ने अधिकार समन्वय समितिलाई छ हामीलाई छैन्, फेरी कति नै हुुन्छ र ? बरामद सामाग्री उनले भने– ‘केहि दिन अघिमात्रै पाँचवटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा ल्याएको थियौँ, त्यो समन्वय समितिकै आग्रहमा अमिलियाको प्रहरी कार्यालयमै छोडेका छौँ, कुुनै अनियमित भएको छैन् शंका गर्नुपर्दैन्’ उनले भने । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार बितेको तीन महिनामा मात्रै गाडीहरु ढुंगाजन्य वस्तु उत्खनन् तथा निकासीमा संलग्न १ सय २३ वटा गाडी पक्राउ परे तर नियन्त्रणमा लिइएका गाडीबाट बरामद ढुंगाजन्य वस्तु समन्वय समितिले प्रहरीले नबुझाएको बताउँछ भने प्रहरीले समन्वय समितिलाई नै बुझाउने गरेको बताउँदा बरामद सामाग्री कहाँ जान्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ?
प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहनमा संलग्न पक्राउ पर्ने गरेपनि उनीहरुबाट बरामद गरिएको सामाग्रीको दुुरुपयोग हुुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बनेको छ । समन्वय समितिले अवैधरुपमा ढुंगाजन्य वस्तुहरु उत्खनन् र निकासी गर्ने ट्याक्टरलाई २५ हजार, टिप्परलाई ५० र जेसिविलाई ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना शुल्क तोकेको छ । यसरी जरिवानामा पर्ने गाडीबाट आउने रकमको २० प्रतिशत प्रहरीलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । पक्राउ पर्ने गाडीहरुमा रहेका ढुंगाजन्य वस्तुहरु भने समन्वय समितिले संरक्षणमा राख्न सकेको छैन् । प्रहरीले पक्राउ गर्ने र कारवाहीका लागि समन्वय समितिमा पत्र पठाउने तर ढुंगाजन्य वस्तुहरु प्रहरीले नै गायव पार्ने गरेको छ ।